ဘယ်လ်ဂျီယံနှင့် Golden Visa အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံတွင်စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။
အကောင်းဆုံး ဘယ်လ်ဂျီယံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်အတွက်ကိုယ်စားလှယ်များ နှင့်ရှေ့နေများ ဘယ်လ်ဂျီယံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအတွက်ပွဲစားဘယ်လ်ဂျီယံရှိနေထိုင်ခွင့်အစီအစဉ်များသည်ဖောက်သည်များ၏ကာကွယ်မှုအတွက်တွဲဖက်လုပ်ဆောင်သည်။
ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်နေထိုင်ခြင်းသည်ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးအပ်ခြင်း၊ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနေထိုင်ခြင်း၊ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်မှနေထိုင်ခြင်း၊ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဒုတိယနေထိုင်မှု၊ , ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်၊ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ယာယီနေထိုင်ခွင့်၊ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ဘယ်လ်ဂျီယံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်နှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံတွင်နေထိုင်မှုနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံရှိစီးပွားရေးနိုင်ငံသားအစီအစဉ်များ၊ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံကူးလက်မှတ်, ဒုတိယ passp ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခွင့်နှင့်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံသံတမန်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဘယ်လ်ဂျီယံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ၊ ဘယ်လ်ဂျီယံရှိရွှေဗီဇာ၊ ဘယ်လ်ဂျီယံရှိရွှေဗီဇာ၊ ဘယ်လ်ဂျီယံရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ၊ ဘယ်လ်ဂျီယံရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ဘယ်လ်ဂျီယံတွင်နေထိုင်ခွင့်နှင့်ရွှေဗီဇာ၊ ဘယ်လ်ဂျီယံရှိရွှေဗီဇာနိုင်ငံသား၊ ဘယ်လ်ဂျီယံရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ဘယ်လ်ဂျီယံရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်။
နောက်ထပ်အထောက်အပံ့ဖြင့်ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏ Residency အားလုံးအတွက်“ 1 stop solutions” ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ဘယ်လ်ဂျီယံတွင်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - EUR 500,000
ဘယ်လ်ဂျီယံသည် OECD ၏ကောင်းမွန်သောဘဝအညွှန်းကိန်း၏အနည်းဆုံးအမှတ် ၁၀ တွင်အကောင်းဆုံးစံချိန်စံညွှန်းများရှိပြီး OECD ပုံမှန်ထက်ပုံမှန်မိသားစုယူနစ်များပြားသည်။ ထို့အပြင်ဘရပ်ဆဲလ်တွင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရောက်ရှိခြင်းသည်နယူးယောက်မြို့တွင်ဒုတိယနေရာတွင်တည်ရှိသည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အဆောက်အအုံပေါင်း ၁၅၀၀ နီးပါးသည်သံအမတ် ၃၀၀၀ ခန့်နှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့များ၏ဥရောပအလယ်ပိုင်းအမိန့်တော် ၂၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။
ဘရပ်ဆဲလ်တွင်ပိုမိုကြာရှည်စွာနေထိုင်ရန်အတွက်စတူဒီယိုကွန်ဒိုမှအထပ်မြင့်အဆောက်အအုံများအားမြို့တော်စုစုပေါင်း ၁၉ ခုနှင့်ဆင်ခြေဖုံးဒေသများတွင်ငှားရမ်းခြင်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ပါ ၀ င်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်ကျယ်ပြန့်သောဆုံးဖြတ်ချက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တည်းခိုခန်းချန်နယ်တွင်တန်ဖိုးရှိသောအချက်များကိုရှာဖွေပါ၊ ဥပမာ၊ ဘယ်လ်ဂျီယံတွင်နေထိုင်ရန်၊ ဘရပ်ဆဲလ်၏ရပ်ကွက်များ၊ သို့မဟုတ်ဘယ်လ်ဂျီယံရှိအိမ်တစ်လုံးကိုရှာဖွေပါ။
ထိပ်တန်းအဆင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုကိုကျယ်ပြန့်စွာလက်လှမ်းမီသည်၊ ၎င်းကိုအမေရိကန်ထက်စျေးနှုန်းချိုသာသောအရာအဖြစ်ရှုမြင်သည်။ ဘယ်လ်ဂျီယံသည်နိုင်ငံများမှခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုလက်တွေ့စမ်းသပ်ရာနေရာတစ်ခုဖြစ်လာသည်ဟုဆိုသည်။
ဘယ်လ်ဂျီယံ၏ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံသောအလှကုန်များသည်မြို့တော်ဘရပ်ဆဲလ်ကိုကမ္ဘာအနှံ့ရှိအုပ်ချုပ်ရေးရုံးများနှင့်ရုံးခန်းအမျိုးမျိုးနှင့် တွဲဖက်၍ လက်ရှိဟောင်းဖြစ်သူကိုပင်လျှော့ချရန်အဆိုပြုထားသည်။
၎င်းသည်ဥရောပသမဂ္ဂ (EU) ၏နေအိမ်ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာအနှံ့အပြားရှိမြို့ကြီးများနှင့်နီးကပ်စွာခရီးထွက်နိုင်ပြီးအခွင့်အာဏာရှိသောစကားသုံးမျိုး (ပြင်သစ်၊ ဒတ်ခ်ျနှင့်ဂျာမန်) နှင့်ကြီးမားသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်ယက်ရှိသည်။
ဒါ့အပြင်အသက်ရှင်ဖို့လည်းကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါတယ်။ ဘရပ်ဆဲလ်တွင်အခြေချနေထိုင်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားသူများသည်မာကာ၏လူနေမှုအဆင့်အတန်းအရအခြားအနောက်ဥရောပနိုင်ငံများဖြစ်သောလန်ဒန်၊ ကိုပင်ဟေဂင်၊ ဗီယင်နာနှင့်ဇူရစ်ခ်ျများထက်ဈေးချိုသည်။ ထိုမျှမကဘယ်လ်ဂျီယံသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ မက်ထရိုနှင့်ကေဘယ်လ်များပါ ၀ င်သောညှိနှိုင်းဖွဲ့စည်းထားသည့်ကောင်းမွန်သောပွင့်လင်းသောကားဘောင်ကိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့်ဘယ်လ်ဂျီယံတစ်ပတ်ပတ်လည်လေ့လာရေးခရီးကိုလွယ်ကူစွာသွားနိုင်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည် ကန့်သတ်) သို့မဟုတ်ပင်အိမ်နီးချင်းတိုင်းပြည်သို့ပျံသန်း။ အခြေခံအစာစားခြင်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်တိုင်းပြည်သည်၎င်း၏စားသောက်ဆိုင်များ၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်သဘောသဘာဝကိုကျေနပ်သည်။ အမှန်စင်စစ်ဘရပ်ဆဲလ်သည် Michelin ကြယ်များအနက်ထိပ်ဆုံးဥရောပမြို့ပြအသိုင်းအဝိုင်းတွင်ရှိသည်။ စုစုပေါင်းဘီလ်ဂိတ် ၂၀၁၆ အတွက် Michelin လမ်းညွှန်တွင်ကြယ်သုံးပွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ ကြယ်နှစ်ပွင့်အဆင့်ရှိစားသောက်ဆိုင် ၂၀ နှင့်ကကြယ်သီး ၁၁၇ ကြယ်ပွင့်နှင့်အတူကဖေး ၃ ခုကိုမီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။ အစားအစာ၊ အပန်းဖြေခြင်းနှင့်ခရီးသွားလာခြင်းများအတွက်အကောင်းဆုံးပြသခြင်းအပြင်နေ့စဉ်သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေရန်နှင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကွန်ရက်များ၊ ကျောင်းများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအသင်းအဖွဲ့များအတွက်မျှော်လင့်ချက်များစွာရောနှောနေခြင်းသည်ဘယ်လ်ဂျီယံသည်အခြားအရေးပါသောဖြစ်ရပ်များနှင့်မတူဘဲရပ်တည်နေသည်ဟုဆိုလိုသည်။ pat destination သို့။ အရွယ်အစားအနည်းငယ်ရှိသော်လည်းဘယ်လ်ဂျီယံသည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးကစားသမားဖြစ်သည်။ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ၏နှုန်းထားများသည်ဂျီဒီပီ၏ ၈၀% ကျော်ရှိသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့အနေနှင့်ကမ္ဘာပေါ်တွင် ၁၃ ခုမြောက်အထင်ရှားဆုံးသောနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ထက်ပိုမို€ 2016 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိကုန်သွယ်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာ့ပကတိကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်မှု၏ ၂.၅% ခန့်ဖြစ်သည်။ လူ ဦး ရေ၏ ၀.၂ ယူရိုအောက်ရှိသောတိုင်းပြည်အတွက်ကြောက်စရာမလိုပါ။
ဘယ်လ်ဂျီယန်လူမျိုးများသည်လူ့အဖွဲ့အစည်းအားသဘောမတူပါ။ နောက်ဆုံးနိုင်ငံရေးဆုံးဖြတ်ချက်၌စာရင်းပေးသွင်းထားသည့်မဲဆန္ဒရှင် ၈၉ ရာခိုင်နှုန်းသည်မဲပေးခြင်းကိုအဆုံးသတ်လိုက်သည်။ OECD နိုင်ငံ ၃၄ နိုင်ငံအနက်အမြင့်ဆုံးနှင့် ၆၈% ထက်ပိုများသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်တည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သောဒီမိုကရေစီမူဘောင်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဥရောပလူမှုရေးစစ်တမ်းအရဥရောပလူ ဦး ရေ၏ (၅၀) ရာနှုန်းကျော်တွင်ရိုမန်ကက်သလစ်၊ ပရိုတက်စတင့်၊ အစ္စလာမ်၊ ဂျူးဘာသာ၊ အင်္ဂလီကန်၊
ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံသားများသည်ယေဘူယျအားဖြင့်ပိုမိုချမ်းသာကြပါသည်။ OCED ၂၀၁၅ အစီရင်ခံစာအရပုံမှန်မိသားစု၏အသားတင်ကြွယ်ဝမှုကိုယူရို ၈၉,၀၅၇ အဖြစ်သတ်မှတ်သည်၊
ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်အခြေခံအသေးစိတ်
ဘယ်လ်ဂျီယံ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency အတွက်အချိန်ထုတ်ယူခြင်း
ဘယ်လ်ဂျီယံ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ဘို့အဘယ်ကြောင့်သွားပါ
ဘယ်လ်ဂျီယံသည်ကမ္ဘာ့သြဇာအရှိဆုံးနိုင်ငံများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးမြို့တော်ဘရပ်ဆဲလ်တွင်အရေးပါသောအီးယူအဖွဲ့အစည်းများတည်ရှိသည်။ နိုင်ငံအဆင့်တွင်မြင့်မားသောလူနေမှုအဆင့်အတန်း၊ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီပညာရေးနှင့်ကျန်းမာရေးအပြင်အလွန်ကောင်းမွန်သောလေကြောင်းနှင့်ကုန်းလမ်းခရီးများနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုရှိသည်။ Schengen အဖွဲ့ ၀ င်ဖြစ်သောကြောင့်ဘယ်လ်ဂျီယံနေထိုင်ခွင့်သည်သင်နှင့်သင်၏မိသားစုဝင်များအားဥရောပတစ်ဝှမ်းလုံး၌သူတို့၏ဗီဇာရရှိရန်ခွင့်ပြုသည်။
သင်နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိပြီးပါကသင့်အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်မှီခိုသောကလေးများအပါအ ၀ င်သင့်မိသားစုဝင်များသည်မိသားစုပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကိုရရှိနိုင်ပါသည်။
Residency ဘယ်လ်ဂျီယံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် insite
ထိရောက်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစာရင်းသွင်းခြင်းအတွက်အရေးအကြီးဆုံးသတ်မှတ်ချက်အရသင်၏လုပ်ငန်းသည်ဒေသခံအလုပ်အကိုင်များဖန်တီးပေးခြင်းသို့မဟုတ်ဒေသတွင်းကုမ္ပဏီများမှကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရယူခြင်းအားဖြင့်သင်၏စီးပွားရေးသည်ဘယ်လ်ဂျီယံစီးပွားရေးကိုသိသိသာသာအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ ဘယ်လ်ဂျီယံကုမ္ပဏီအသစ်သို့မဟုတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီ၏လက်အောက်ခံကိုသင်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများအားလုံးတင်သွင်းပါကလျှောက်လွှာလုပ်ငန်းစဉ်၏ပုံမှန်ကာလသည် ၃-၈ လဖြစ်သည်။
သင်၏စီးပွားရေးအလားအလာရှိကြောင်းသရုပ်ပြပါ။ သင်၏လျှောက်လွှာတွင်အနည်းဆုံးပထမလအနည်းငယ်အတွင်းသင်၏ကုမ္ပဏီနှင့်အတူလုပ်ကိုင်ရန်စီးပွားရေးအစီအစဉ်နှင့်စီးပွားရေးနှင့်ကုန်ကျစရိတ်အထောက်အထားများပါ ၀ င်ရမည်။ ခွင့်ပြုမိန့်ကိုတစ်နှစ်အတွင်းကြိုတင်ပေးရပြီးသင်၏လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် မူတည်၍ အသစ်ပြောင်းသည်။ သင်၏ခွင့်ပြုချက်ကိုခွင့်ပြုပြီးသည့်နောက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်မရှိပါ။ သင်သည် ၃ နှစ်နေထိုင်ပြီးနောက်ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံသားဖြစ်ရန်လျှောက်ထားနိုင်ပြီးပုံမှန်အားဖြင့်နောက်ထပ် ၂ နှစ်ထပ်တိုးသည်။
ပထမနှစ်တွင်၊ ဘယ်လ်ဂျီယံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကုန်ကျစရိတ်များအတွက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ယူရို ၁၅၀,၀၀၀ ကိုသုံးရမယ်။ ငှားရမ်းခနဲ့ ၀ န်ထမ်းတွေအတွက်ပြန်လည်အသုံးချစရိတ်၊ တရားဝင်ကုန်ကျစရိတ်၊ ပိုင်ဆိုင်မှု (အိမ်၊ ရုံး၊ အလုပ်နေရာစသဖြင့်) ။ သင်တစ် ဦး နိုင်ငံသားမရမှီ 150,000 နှစ်ကာလအဘို့, သင်သာယူရို5ရေတွက်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း နေထိုင်ခွင့် ဘယ်လ်ဂျီယံများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များကသည် နှင့် နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ရှေ့နေများ ဘယ်လ်ဂျီယံ ဖောက်သည်များနှင့်ဘယ်လ်ဂျီယံရှိသူတို့၏မိသားစုများအားဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ထောက်ခံမှု၊ ဘယ်လ်ဂျီယံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အလမ်းများကိုနိုင်ငံ ၃၇ နိုင်ငံမှထောက်ပံ့ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ဘယ်လ်ဂျီယံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်ဘယ်လ်ဂျီယံမှ Golden Visa ဖြင့်နေထိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်နိုင်ငံသားအဖြစ်မှဘယ်လ်ဂျီယံသို့မဟုတ်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တို့ဖြင့်သာနေထိုင်ခွင့်ပြုရုံသာမကဘဲ၊ ဘယ်လ်ဂျီယံမှအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။ ဘယ်လ်ဂျီယံသို့မဟုတ်ကမ်းလွန်၊ ဘယ်လ်ဂျီယံရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များနှင့်ငွေရေးကြေးရေးစီမံကိန်းနှင့်အခြားများစွာပါဝင်သည်။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများကနေထိုင်ရာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်နိုင်မှတဆင့်ဘယ်လ်ဂျီယံအဘို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီ ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်တတ်နိုင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ၊ ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကတတ်နိုင်သောနေထိုင်ခွင့်၊ ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကတတ်နိုင်သောနေထိုင်ခွင့်နှင့်ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်တတ်နိုင်သောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီ
ဘယ်လ်ဂျီယံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်။
နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ ခုသို့ဘယ်လ်ဂျီယံရှိရွှေဗီဇာ။
နိုင်ငံသားအဖြစ်မှဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း။
ဘယ်လ်ဂျီယံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။
ဘယ်လ်ဂျီယံမှ ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးအခြေပြုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး။
နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဘယ်လ်ဂျီယံရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
နိုင်ငံသားအဖြစ်သည်ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ။
ဘယ်လ်ဂျီယံမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်များ။
ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်သူတို့၏ Residency အတွက်ပြုလုပ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှထွက်ခွာလိုပါကဖောက်သည်သည်ဘယ်လ်ဂျီယံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအပေါ်ကောင်းမွန်သောအကျိုးအမြတ်ရရှိသင့်သည်ဟူသောအမြင်ဖြင့်ဘယ်လ်ဂျီယံရှိအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဘယ်လ်ဂျီယံရှိအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေဆောက်လုပ်သူများနှင့်ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိပြီးသူတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများသည်ဘယ်လ်ဂျီယံရှိကောင်းသောနေရာများတွင်ရှိနေပြီးအကောင်းဆုံးအကျိုးအမြတ်ကိုရရှိစေသည်။
သိရန်လိုအပ် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဘယ်လ်ဂျီယံနေထိုင်ခွင့်
ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေ၏နေထိုင်မှုသည်သင်၏အောင်မြင်သောနေထိုင်မှုအတွက်ဘယ်လ်ဂျီယံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အသေးစိတ်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အပံ့များပေးလိမ့်မည်။ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စံဝန်ဆောင်မှုများတွင် -
ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency ကိုဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံရှိ Residence Permit ရရှိရန်နှင့်ငြင်းဆန်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက် Residency ကိုအကြံပြုခြင်းမပြုမီအစီရင်ခံရန် Diligence ကိုပြုလုပ်ပါသည်။
ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်လုံလောက်သောလုံ့လဝီရိယရှိသောအစီရင်ခံစာအပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုအတွက်အခြားအစီအစဉ်များကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
သင်၏ Residency နှင့်ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့သို့လျှောက်လှမ်းနိုင်ရန်အတွက် client နှင့်မိသားစု ၀ င်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းဖြင့်နေထိုင်ခွင့်စာရွက်စာတမ်းများဘာသာပြန်ခြင်းနှင့်အက်ပလီကေးရှင်း။ Residency အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးရှေ့နေများသည်ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနှင့်ရွှေဗီဇာဖြင့်ဖြည့်သည့်ပုံစံများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုကူညီလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ဖော်ပြပါလူပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ဘယ်လ်ဂျီယံရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားဘယ်လ်ဂျီယံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများက Residency ကိုထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
နေထိုင်ခွင့် ဘယ်လ်ဂျီယံများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ကုန်သည်များအားဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံမှသို့မဟုတ်လက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက်ဖြန့်ဖြူးသူများကိုကမ်းလှမ်းခြင်းမပြုပါ။
နေထိုင်ခွင့် ဘယ်လ်ဂျီယံများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များအားဖွငျ့ဖွစျသညျ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံတွင်နည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ဘယ်လ်ဂျီယံသို့ဖြစ်စေ၊ သို့ဖြစ်စေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များကိုစက်မှုဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ဘယ်လ်ဂျီယံများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံသည် ဘယ်လ်ဂျီယံတွင်တရားမဝင်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့် ဘယ်လ်ဂျီယံ ဘယ်လ်ဂျီယံရှိမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သူများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ဘယ်လ်ဂျီယံများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ဘယ်လ်ဂျီယံရှိအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒသို့မဟုတ်နျူကလီးယားလက်နက်များရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် ကုန်သွယ်ရေး၊ ဘယ်လ်ဂျီယံတွင်သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းတို့ပြုလုပ်နေသောဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံများအတွက်ဘယ်လ်ဂျီယံကိုထောက်ခံမှုမရရှိနိုင်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ဘယ်လ်ဂျီယံ တရားမဝင်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
နေထိုင်ခွင့် ပရိုဂရမ်ဝန်ဆောင်မှု ဘယ်လ်ဂျီယံ ဘယ်လ်ဂျီယံရှိဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ဘယ်လ်ဂျီယမ် ဘယ်လ်ဂျီယမ်ရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏နေထိုင်ခွင့် ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်ရှေ့ရပျ ဘယ်လ်ဂျီယမ်ရှိမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုလုပ်ငန်းတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမပံ့ပိုးပါနှင့်။
“ အရေးကြီးတဲ့သတိပေးချက် : MM Solutions INC သည်ဘယ်လ်ဂျီယံနှင့်၎င်းတို့၏ KYC အတွက်ဖောက်သည်များအတွက် AML စာရွက်စာတမ်းများကိုတိကျသေချာစေရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော်လည်း၊ လျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုရန်ဘယ်လ်ဂျီယံရှိအာဏာပိုင်များကငြင်းပယ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်ရှိသည်။ နေထိုင်ခွင့် ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Residency မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွေ့အကြုံနှင့်ဘယ်လ်ဂျီယံ၏ဥပဒေရေးရာလိုအပ်ချက်များကြောင့်ကျွနု်ပ်တို့အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်များကိုပြုလုပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်အကောင်းဆုံးအောင်မြင်နိုင်သောနှုန်းဖြင့်စျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းကိုကမ်းလှမ်းသည်။
ဖောက်သည်များနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများကိုဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံအတွက်ထောက်ပံ့ပေးသည့်ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံတွင် Dual Residency အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့သည်။
ဖောက်သည်များအားထောက်ပံ့မှုပေးသောဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့ရွက်များနှင့်ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်ဥပဒေရေးရာကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်အတွေ့အကြုံရှိသော Residency ။
သင်၏ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခွင့်မပေးမီနှင့်ခွင့်ပြုချက်အရကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းအဖွဲ့ ၀ င်သည်ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအထောက်အပံ့အတွက်ထိုတွင်ရှိလိမ့်မည်
Residency တွင်ဘယ်လ်ဂျီယံအပါအ ၀ င်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရှိပြီးကမ္ဘာတစ်လွှားမှ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်ကူညီပေးနေသည်။
အမှု၌၊ သင်၏ Residency သည်ဘယ်လ်ဂျီယံသို့မအောင်မြင်ပါကကျွန်ုပ်တို့ဝန်ဆောင်မှုပေးသောနိုင်ငံပေါင်း ၃၆ ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစီအစဉ်ခနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်။
ဘယ်လ်ဂျီယံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်ကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်
နေထိုင်မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်တွက်ချက်ရန်မိသားစု ၀ င်များနှင့်အသက်အရွယ်များစသည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖြည့်စွက်ပါ။ ဘယ်လ်ဂျီယမ်အတွက်ဖောက်သည်အမြောက်အများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်နှင့် Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်များပါဝင်သည်။
ပုံစံ ဗီဇာ ဘယ်လ်ဂျီယံ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ချက်ချင်းသို့မဟုတ်အနာဂတ်လိုအပ်ချက်များအတွက်ဘယ်လ်ဂျီယံတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအနည်းငယ်ကိုသာစာရင်းပြုစုထားသည်။
သင်သည်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူဘယ်လ်ဂျီယမ်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်နေပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အနေဖြင့်၊ ဘယ်လ်ဂျီယံတွင်တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်သင်လိုအပ်နိုင်သည့်အချိန်တွင်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများစွာပေးအပ်ရန်ရှိပါသည်။
Residency အပြင်ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘယ်လ်ဂျီယံနှင့်စီးပွားရေး၊ အိုင်တီနှင့် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ ဘယ်လ်ဂျီယံနှင့်အခြားနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ ခုအတွက်တစ်နေရာတည်းတွင်တစ်နေရာတည်းဖြစ်စေရန်ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်အခြားအတိုင်ပင်ခံများကပေးသောထီးတစ်ခုအောက်တွင်သင်မတွေ့နိုင်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများ၊ အတိုင်ပင်ခံများနှင့်ဘယ်လ်ဂျီယံနှင့်နိုင်ငံတကာမှအကူအညီများဖြင့်ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်၏ Residency ကိုကျော်လွန်သောလမ်းကိုထောက်ခံသည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ ဘယ်လ်ဂျီယံတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင် or Offshore နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ (ဘယ်လ်ဂျီယံတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပို၍ ဈေးချိုသည်။ )
ဘယ်လ်ဂျီယံသို့ပြောင်းရွှေ့အခြေချမည့်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမဆိုလိုအပ်လိမ့်မည် ဘယ်လ်ဂျီယံရှိကိုယ်ပိုင်ဘဏ်အကောင့် ဘယ်လ်ဂျီယံရှိကုမ္ပဏီဘဏ်စာရင်းနှင့်လည်းကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
Incase သင်အဘို့, ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်တိုင်ပင်လိုအပ်ပါတယ် ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်ဒီဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုဖြေရှင်းချက် ဘယ်လ်ဂျီယံရှိရိုးရာသို့မဟုတ် fintech ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက် (သို့) crypto ဖြေရှင်းချက်များကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ။
မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက် သင်စီစဉ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လ်ဂျီယံ ဘယ်လ်ဂျီယံရှိလက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဝယ်ယူခြင်းဖြင့်စီးပွားရေးစတင်ပါ ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်လက်ငင်းစတင်ဘို့။
ဘယ်လ်ဂျီယံရှိ HR ဝန်ဆောင်မှုများ
ကျွန်တော်တို့၏ ဘယ်လ်ဂျီယံရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီ အမြန်စုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်သည်။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်နေရာလွတ် post အခမဲ့ဖြစ်သည်။
ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက် virtual ဖုန်းနံပါတ်များ
ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံအတွက်စီးပွားရေးတယ်လီဖုန်းစနစ်များ ဘယ်လ်ဂျီယံများအတွက်ကို virtual နံပါတ်များ 102 နိုင်ငံများနှင့် 291 မြို့ကြီးများ။
စာရင်းကိုင်, ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့် အများကြီးပို.
ဘယ်လ်ဂျီယံရှိ Virtual ရုံးလိပ်စာ
ဘယ်လ်ဂျီယံရှိ Setup စီးပွားရေးလုပ်ငန်း
ဘယ်လ်ဂျီယံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက်, အတွက် setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဘယ်လ်ဂျီယမ်.
အောက်ဖော်ပြပါ IT ဖြေရှင်းနည်းများကိုဘယ်လ်ဂျီယံတွင်ပေးပါသည်
ဘယ်လ်ဂျီယံတွင် Web ဒီဇိုင်း
ဘယ်လ်ဂျီယံတွင် web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ဘယ်လ်ဂျီယံရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ဘယ်လ်ဂျီယံရှိ App ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ဘယ်လ်ဂျီယံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ရှေ့နေများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းမှုဖြင့်တရား ၀ င်နေထိုင်ခွင့်ကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အောင်မြင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဘယ်လ်ဂျီယံ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်။ ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်ဘယ်လ်ဂျီယံတွင်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုယ်စားလှယ်များရှိသည်။ ဘယ်လ်ဂျီယံတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများအတွက်ရှင်းလင်းသောမဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းချက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့မှကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်ဖောက်သည်များ၏အောင်မြင်မှုအတွက်ထုံးစံအတိုင်းဖြေရှင်းမှုများကိုပေးသည်။
သင်၏မိသားစု ၀ င်များ (ကလေးများ၊ ဇနီး၊ မိဘများ) သည်ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခွင့်ခွင့်ပြုထားပြီးဘယ်လ်ဂျီယံ၌နေထိုင်ခွင့်ကိုအတည်ပြုပြီးသည်။
ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများက Residency မှသင်၏ကိုယ်စားဥပဒေရေးရာဆောင်ရွက်မှုများအားလုံးအတွက်ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်ရှေ့နေသည်လိုအပ်သည်။ သင်သည်ဘယ်လ်ဂျီယံသို့ရောက်နေလျှင်သို့မဟုတ်ဘယ်လ်ဂျီယံသို့သွားရန်စီစဉ်ထားပါကသင်၏ရှေ့နေအားဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သည်။
ရှေ့နေပါဝါရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အပိုမယူပါ။ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုအဝေးမှစတင်ရန်စီစဉ်ပါကဘယ်လ်ဂျီယံပိုင်နက်တွင်အသုံးပြုရန်သင်၏ရှေ့နေအားတရားဝင်တရားဝင်ဖြစ်သင့်သည်။ သင်၏နေထိုင်ရာနိုင်ငံပေါ် မူတည်၍ ၎င်းကိုအက်တလက်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဘယ်လ်ဂျီယံကောင်စစ်ဝန်ရုံးကတရားဝင်ဖြစ်စေသင့်သည်။
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - ဘယ်လ်ဂျီယံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်နေထိုင်ခွင့်
ဘယ်လ်ဂျီယံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းကိုဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့်ဘယ်လ်ဂျီယံ၏နေထိုင်ခြင်းကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဘယ်လ်ဂျီယံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ရန်လျှောက်ထားခြင်း၊ ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်း။ ဘယ်လ်ဂျီယမ်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများနှင့်အကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ ဘယ်လ်ဂျီယံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်နှင့်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှကူညီခြင်း၊ ဘယ်လ်ဂျီယံမှာ။
ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့် ဘယ်လ်ဂျီယံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနေထိုင်ခွင့် ဘယ်လ်ဂျီယံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကနေထိုင်ခွင့် ဘယ်လ်ဂျီယံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများမှနေထိုင်ခွင့် | ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများ၏နေထိုင်မှု
ဘယ်လ်ဂျီယံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံရှိစီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည့်နည်းများဖြင့်ဘယ်လ်ဂျီယံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူခြင်းဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားအဖြစ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများမှနိုင်ငံသားအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများမှနိုင်ငံသားအဖြစ်ဖြင့်လည်းကောင်းနိုင်ငံသားပြုရန်လျှောက်ထားပါ။ ဘယ်လ်ဂျီယံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များ၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်ဘယ်လ်ဂျီယံရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ | စျေးနှုန်းသင့်တင့်သောလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများဘယ်လ်ဂျီယံ | စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများဘယ်လ်ဂျီယံတွင် | စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ | စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လ်ဂျီယံ | ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်တတ်နိုင်သောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ
ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ၏တရားဝင်နိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်း၊ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အိမ်ခြံမြေ၊ စီးပွားရေး၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ စသည်ဖြင့်ဘယ်လ်ဂျီယံကိုဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားသည်။ ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်အကောင်းဆုံးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ၊ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံရဲ့အကောင်းဆုံးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများနှင့်ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အကြံပေးများ၊ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဘယ်လ်ဂျီယံမှာအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှအလုပ်လုပ်ခြင်း
ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဝန်ဆောင်မှု ဘယ်လ်ဂျီယံရှိဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံ
ဘယ်လ်ဂျီယံရှိရွှေဗီဇာကိုအစိုးရ၏ငွေချေးစာချုပ်၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေစသည့်နည်းလမ်းများဖြင့်ဘယ်လ်ဂျီယံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ဘယ်လ်ဂျီယံ၏နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဘယ်လ်ဂျီယံသို့ရွှေဗီဇာလျှောက်ထားခြင်း၊ ဘယ်လ်ဂျီယံရှိကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများ၊ ဘယ်လ်ဂျီယံရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများနှင့်ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံများ၊ ဘယ်လ်ဂျီယံရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဘယ်လ်ဂျီယံရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်၊
ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ | ဘယ်လ်ဂျီယံရှိရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များ ဘယ်လ်ဂျီယံရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ ဘယ်လ်ဂျီယံရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်ရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံ
ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဘာလဲ။
Residentency အတွက်ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်အနည်းဆုံးယူရို ၅၀၀,၀၀၀ ဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဘယ်လ်ဂျီယံရှိကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေနှင့်ဘယ်လ်ဂျီယံရှိအေးဂျင့်များသည်ဘယ်လ်ဂျီယံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် Residency ကိုအထောက်အပံ့ပြုပါသည်။
ဘယ်လ်ဂျီယံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်များကြောင့် Residency သည်အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းအတွက်ဖြစ်သည်၊ ဘယ်လ်ဂျီယံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်တိုင်ပင်ကြေးကိုသာပေးရသည်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက် Residency အတွက်အခြားအထောက်အပံ့များကိုလည်းပေးသည်။
ဘယ်နိုင်ငံမှနေထိုင်သူများသည်ဘယ်လ်ဂျီယံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်ဘယ်လ်ဂျီယံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဗီဇာဖြင့် Residency လျှောက်ထားနိုင်ပါသလား။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်သည်မည်သည့်နိုင်ငံတွင်မဆိုနိုင်ငံသားများအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်အာရှမှဘယ်လ်ဂျီယံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အာဖရိကမှဘယ်လ်ဂျီယံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဥရောပမှဘယ်လ်ဂျီယံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ တောင်အမေရိကမှဘယ်လ်ဂျီယံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ မလေးရှားမှဘယ်လ်ဂျီယံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှဘယ်လ်ဂျီယံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားမှဘယ်လ်ဂျီယံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ သီရိလင်္ကာမှဘယ်လ်ဂျီယံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ နီပေါမှဘယ်လ်ဂျီယံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အိန္ဒိယမှဘယ်လ်ဂျီယံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency၊ ယူအေအီးမှဘယ်လ်ဂျီယံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလမ်းညွှန်မှုအားဖြင့် Professional ကနေထိုင်မှု ဘယ်လ်ဂျီယံ
ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency အတွက်အရေးကြီးသောဝေါဟာရများ
တရားရေး ၀ န်ကြီးဌာန (www.moniteur.be)
ဖက်ဒရယ်အလုပ်အကိုင်နှင့်အလုပ်သမား ၀ န်ကြီးဌာန (www.meta.fgov.be/)
စီးပွားရေးရေးရာ ၀ န်ကြီးဌာန (http://www.mineco.fgov.be/)
link ကိုမှ ဘယ်လ်ဂျီယံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန , ဘယ်လ်ဂျီယံမှာရှိတဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရှိန်မြှင့်များအတွက်မူဝါဒများရေးဆွဲတာဝန်ရှိသည်